Androgel testosterone + Genotropin GoQuick 12 mg 36 IU x 5 (la heli karo - HGH Bangkok)
Waa maxay badeecada aad u baahan tahay?
Bogga ugu weyn Androgel testosterone + Genotropin GoQuick 12 mg 36 IU x 5 (waxaa lagu heli karaa HGH kaliya!)
Androgel testosterone + Genotropin GoQuick 12 mg 36 IU x 5 (waxaa lagu heli karaa HGH kaliya!)
by Besins Waxsoosaarka Belgium
Waa maxay AndroGel sideese loo adeegsadaa?
AndroGel waa dawo dhakhtar qoro oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo astaamaha yaraanta testosterone. AndroGel waxaa loo isticmaali karaa kaligiis ama daawooyin kale.
AndroGel waxay ka tirsan tahay nooc daroogo ah oo la yiraahdo Androgens.
Lama oga in AndroGel uu badbaado iyo waxtar ku leeyahay carruurta.
Maxay yihiin waxyeelooyinka suurtagalka ah ee AndroGel?
AndroGel waxay sababi kartaa waxyeelo daran oo ay ka mid yihiin:
Kaadida oo kordhay,
luminta kaadi xakamayn,
xanuun leh ama kaadida oo adkaata,
xanuunka naaska ama barar,
miisaanka oo kordha,
neefta oo ku qabata xilliga hurdada,
laab xanuun ama cadaadis,
xanuun ku faafaya daankaaga ama garabka,
xanuunka caloosha sare,
saxaro midab dhoobo leh,
hurdi maqaarka ama indhaha,
qufac kedis ah,
neefsasho deg deg ah,
qufacaya dhiigga, Iyo
barar, diirimaad ama guduudasho gacanta ama lugta ah
Raadso caawimaad caafimaad isla markaaba, haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamaha kor lagu soo sheegay.
Saameynaha ugu caansan ee AndroGel waxaa ka mid ah:
guduudasho, cuncun, gubasho, maqaar qallafsan ama cuncun kale oo meesha daawada ah lagu dabaqay,
kordhiyay antigen-gaar ah oo qanjirka 'prostate-specific',
cadaadiska dhiigga oo kordhay, v
la yaab leh riyooyin,
kacsiga soo noqnoqda ama dheer,
barar lugahaaga hoose
U sheeg dhakhtarka haddii aad leedahay waxyeellooyin kale oo ku dhibaya ama kaa tagaya.
Kuwani dhammaantood maahan waxyeellooyinka suurtagalka ah ee AndroGel. Wixii macluumaad dheeraad ah, weydii dhakhtarkaaga ama farmashiistahaaga.
Wac dhakhtarkaaga si aad uga hesho talo caafimaad wixii ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca. Waxaad ku soo wargelin kartaa waxyeellooyinkaaga FDA 1-800-FDA-1088.
KHASAARAHA LABAAD EE TESTOSTERONE
Virus-ka ayaa lagu soo warramey carruurta markii labaad ay ku dhacday gelinka testosterone [fiiri DIGNIINnada IYO KA HADALKA iyo LACAG LA'AAN AH].
Carruurtu waa inay ka fogaadaan inay la xiriiraan goobaha codsiyada aan maydhin ama aan dharka lahayn ee ragga isticmaalaya testosterone gel [eeg QAADASHADA IYO MAAMULKA iyo DIGNIIN IYO KA HADALKA].
Bixiyeyaasha daryeelka caafimaad waa inay kula taliyaan bukaanada inay si adag ugu hogaansamaan tilmaamaha lagu taliyay ee isticmaalka [eeg QAADASHADA IYO MAAMULKA, DIGNIIN IYO KA HADALKA iyo MACLUUMAADKA BUKAANKA].
AndroGel (testosterone gel) 1% waa nadiif, bilaa midab ah hydroalkohol aan saliid lahayn oo ay ku jirto testosterone.
Maaddada firfircoonida dawooyinka ee AndroGel 1% waa testosterone, an iyo xajiin. Testosterone USP waa mid cad oo ficil ahaan u cad budada kareemka ah ee kiimikada lagu sharaxay 17-beta hydroxyandrost-4-en-3-one. Qaaciddada qaabdhismeedka waa:
Maaddooyinka ku takhasusay daaweynta jirka ee AndroGel 1% waa carbomer 980, ethanol 67.0%, isopropyl myristate, biyo saafi ah, iyo sodium hydroxide. Waxyaabahani ma aha kuwo firfircoon farmasiix ahaan.
AndroGel 1% waxaa lagu muujiyey in lagu daaweeyo ragga qaangaarka ah xaaladaha la xiriira yaraanta ama maqnaanshaha riwaayad testosterone:
Primary hypogonadism (lagu dhasho or iibsaday): xinjiro xiniinyaha oo ay ugu wacan tahay xaalado ay ka mid yihiin cryptorchidism, laba-geesoodka ah dabka, orchitis, baaritaanka cilladda 'testis syndrome', orchiectomy, Klinefelter's syndrome, chemotherapy, ama waxyeelo sun ah oo khamriga ama biraha culus. Raggaani sida caadiga ah waxay leeyihiin xoog ururin testosterone ah iyo gonadotropins (hormoonka kiciya follicle [FSH], luteinizing hormoon[LH]) kor ku xusan ka heerka caadiga ah.
Hypogonadotropic hypogonadism (ku dhasha ama la helay): gonadotropinor luteinizing hormoon sii deynta hormoonka (LHRH) yaraanta amafeeraha-hypothalamic dhaawaca burooyinka, shooga, ama shucaac. Nimankani waxay leeyihiin testosterone hoose uruurinta dhiigga, laakiin waxay leeyihiin gonadotropins oo ku jira heerka caadiga ah ama hooseeya.
Badbaadada iyo waxtarka AndroGel 1% ee ragga qaba "hypogonadism-da da'da" (sidoo kale loo yaqaan "hypogonadism-ka bilowga dambe") lama dhisin.
Badbaadada iyo waxtarka AndroGel 1% ragga labka ka yar 18 sano lama dhisin [eeg U Isticmaal Dadweynaha Gaarka ah].
Waxyaalaha testosterone ee jirka la mariyo waxay yeelan karaan qiyaaso kala duwan, xoog ama tilmaamo dalab oo laga yaabo inay ka dhashaan soo-gaadhis nidaamsan oo kala duwan.
Daaweynta testosterone (Low T)Eeg Muuqaalka Muuqaalka
QAADASHADA IYO MAAMULKA
Qiyaasta iyo Maamulka ee AndroGel 1% way ka duwan tahay AndroGel 1.62%. Qiyaasta iyo maamulka AndroGel 1.62% tixraac macluumaadkeeda qoro oo buuxa.
Kahor intaadan bilaabin AndroGel 1%, xaqiiji ogaanshaha cudurka hypogonadism adoo hubinaya in uruurinta testosterone ee dhiigga la cabiray subaxnimadii ugu yaraan laba maalmood oo kala duwan iyo in uruurinta testosterone ee dhiigga ay ka hooseeyaan heerka caadiga ah.
Qaadashada iyo Qiyaasta Qiyaasta
Qiyaasta bilowga ah ee lagu taliyey ee AndroGel 1% waa 50 mg oo testosterone ah (ficillada 4 bamka, laba baakad 25 mg ah, ama hal baakidh 50 mg ah), ayaa si toos ah loo mariyaa hal mar subaxdii ilaa garbaha iyo gacmaha kore iyo / ama aagga caloosha (doorbid waqti isku mid ah maalin kasta).
Si loo hubiyo qiyaasta saxda ah, isku-uruurinta testosterone ee dhiigga waa in lagu cabiraa xilliyada. Haddii xaddiga testosterone testosterone uu ka hooseeyo heerka caadiga ah, qiyaasta maalin kasta ee AndroGel 1% waa laga kordhin karaa 50 mg ilaa 75 mg iyo 75 mg ilaa 100 mg ragga qaangaarka ah sida uu takhtarku ku baray (eeg Shaxda 1, Macluumaadka Qaadashada ee AndroGel 1%). Haddii xaddiga testosterone testosterone uu ka sarreeyo heerka caadiga ah, qiyaasta daawada AndroGel 1% maalin kasta waa la yareyn karaa. Haddii xaddiga testosterone testosterone uu si joogto ah uga bato heerka caadiga ah qiyaas maalinle ah oo ah 50 mg, daaweynta AndroGel 1% waa in la joojiyaa. Intaa waxaa dheer, uruurinta testosterone ee serum waa in si joogto ah loo qiimeeyaa.
Goobta dalabka iyo qiyaasta AndroGel 1% laguma beddeli karo alaabada kale ee testosterone la mariyo.
AndroGel 1% waa in lagu mariyaa nadiif, qalalan, caafimaad qaba, maqaarka dhawrsan ee midigta iyo bidix ee gacmaha kore / garbaha iyo / ama caloosha midig iyo bidix. Aagga dalabka waa inuu ku xaddidnaadaa aagga uu dabooli doono funaanadda shaati-gacmeedka gaaban ee bukaanka. Ha ku darin AndroGel 1% meel kasta oo jirka ka mid ah oo ay ku jiraan xubnaha taranka, laabta, kilkilaha (axillae), jilbaha, ama dhabarka. AndroGel 1% waa in si siman loogu qeybiyaa inta udhaxeysa midigta iyo bidix ee gacmaha / garbaha kore ama labada dhinac ee caloosha.
Qiyaasta maalinlaha ah ee loo qoro ee AndroGel 1% waa in lagu dhajiyaa midigta iyo bidix gacmaha / garbaha kore ee midig iyo bidix iyo / ama caloosha midig / bidix sida ku cad aagagga hadhka leh ee sawirka hoose.
Ka dib markaad geliso jelka, goobta arjiga waa in loo oggolaadaa inay qallajiso dharka ka hor. Gacmaha waa in si fiican loogu dhaqo saabuun iyo biyo kadib marka la codsado. Ka fogow dabka, ololka ama sigaarka ilaa jelku ka qallalayo tan iyo waxyaabaha khamriga ku saleysan, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, waa ololi karaan
Bukaanka waa in lagula taliyaa inuu iska ilaaliyo dabaasha ama qubayska ugu yaraan 5 saacadood ka dib codsiga AndroGel 1%.
Mashiinka Qiyaasta Badan
Si loo helo qaddarka ugu horreeya oo buuxa, waxaa lagama maarmaan ah in la rido bamka qasacadaysan. In sidaa la yeelo, iyada oo qasacaddu ay taagan tahay meel qumman, si tartiib ah oo dhammaystiran u niyad-jebi jiliyaha saddex jeer. Si ammaan ah u tuur jellada saddexda tallaabo ee ugu horreeya. Kaliya waa lagama maarmaan in la buuxiyo bamka ka hor qiyaasta ugu horreysa. Ka dib nidaamka horudhaca, bukaanku waa inay si buuxda u niyad jabaan bamka hal mar waxqabadka 12.5 mg kasta oo testosterone ah oo loo baahan yahay si loo gaaro qiyaasta maalinlaha ah ee loo qoro. Shayga waa in si toos ah loogu geeyaa calaacasha gacanta ka dibna lagu dabaqaa goobaha codsiyada la doonayo. Haddii kale, AndroGel 1% si toos ah ayaa loogu codsan karaa goobaha codsiyada. Jadwalka 1 wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan qiyaasta ragga waaweyn.
Jadwalka 1: Macluumaadka Qaadashada ee AndroGel 1%
Qadarka testosterone Tirada Dhaqdhaqaaqa Mashiinka
50 mg 4 (hal mar maalintii)
75 mg 6 (hal mar maalintii)
100 mg 8 (hal mar maalintii)
Dhamaan waxyaabaha ku jira waa in lagu tuujiyaa calaacasha gacanta isla markiibana lagu dabaqaa goobaha arjiga. Beddel ahaan, bukaanku waxay ku dhufan karaan qayb ka mid ah jellada ku jirta baakadda gacanta baabacada oo waxay codsan karaan goobaha arjiga. Ku celi ilaa inta ka kooban oo dhan la adeegsanayo.
U hoggaansamida adag ee taxaddarrada soo socda ayaa lagula talinayaa si loo yareeyo suurtagalnimada soo-gaadhista labaad ee testosterone ee maqaarka AndroGel 1% -
Carruurta iyo haweenku waa inay iska ilaaliyaan inay la xiriiraan goobta (yada) arjiga ee aan maydhnayn ama aan dharka la dhigin ee ragga isticmaalaya AndroGel 1%.
Bukaanku waa inay gacmaha ku dhaqaan saabuun iyo biyo isla marka la codsado AndroGel 1%.
Bukaanku waa inay ku daboolaan goobta (yada) arjiga dhar (tusaale, funaanad) ka dib marka jelku qalalo.
Xaaladda kahor taas oo la filayo in taabashada maqaarka-ka-maqaarka tooska ah, bukaanku waa inay ku maydhaan goobta dalabka si fiican saabuun iyo biyo si looga saaro wixii hadhay ee testosterone.
Haddii ay dhacdo in maqaarka aan la maydhin ama aan dharka lahayn ee loo adeegsaday AndroGel 1% uu si toos ah ula xiriiro maqaarka qof kale, aagga guud ee xiriirka ee qofka kale waa in lagu dhaqaa saabuun iyo biyo sida ugu dhakhsaha badan.
SIDEE LOOGU SOO KORDHIYAY
Foomamka Qiyaasta iyo Awoodda
AndroGel (testosterone gel) 1% oo loogu talagalay isticmaalka jirka ayaa loo heli karaa sida soo socota:
Mashiin qiyaas qaadanaya. Firfircoon kasta oo mashiin ah wuxuu geeya 12.5 mg oo testosterone ah 1.25 g oo jel ah.
Baakad halbeeg ah oo ka kooban 25 mg oo testosterone ah oo lagu bixiyo 2.5 g oo jel ah.
Baakad halbeeg ah oo ka kooban 50 mg oo testosterone ah oo lagu bixiyo 5 g oo jel ah.
Kaydinta iyo Maareynta
AndroGel 1% waxaa lagu bixiyaa non-nonbuufis, Bambooyin cabir cabir ah oo keena 12.5 mg oo testosterone ah jimicsi dhammaystiran oo bambuujin ah. Bambooyinku waxay ka kooban yihiin caag iyo bir bir ah iyo LDPE / aluminium daaha gudaha ah oo lagu dhejiyay caag adag oo leh daboolka polypropylene. Bamb kasta oo cabirkiisu yahay 88 g oo mitir ah ayaa awood u leh inuu ku fidiyo 75 g oo jel ah ama wax qabad 60-mitir falgal ah; shuqul kasta oo mashiin ah wuxuu bixiyaa 1.25 g oo jel ah.
AndroGel 1% sidoo kale waxaa lagu bixiyaa halbeegyo-baakado aluminium aluminium ah oo ku jira kartoonada 30. Baakad kasta oo ka kooban 2.5 g ama 5 g gel ah waxaa ku jira 25 mg ama 50 mg testosterone, siday u kala horreeyaan.
Nambarka NDC Size ee Xidhmada
0051- 8488-88 2 x 75 g bamka (bamka kasta wuxuu bixiyaa 60 fal celin mashiin oo mitir ah oo leh falgal bambaano oo kasta oo ka kooban 12.5 mg oo testosterone ah 1.25 g oo jel ah)
0051- 8425-30 30 baakad (baakad halbeeg ah oo ka kooban 25 mg oo testosterone ah oo lagu bixiyo 2.5 g oo jel ah)
0051- 8450-30 30 baakad (baakad halbeeg ah oo ka kooban 50 mg oo testosterone ah oo lagu bixiyo 5 g oo jel ah)
Ku kaydi 25 ° C (77 ° F); Dalxiisyada loo oggol yahay 15 ° ilaa 30 ° C (59 ° ilaa 86 ° F) [eeg Heerkulka USP ee Xakamaysan].
Isticmaalay AndroGel 1% bambooyin ama xirmooyin AndroGel 1% ah waa in lagu tuuraa qashinka guryaha si looga hortago arjiga shilalka ah ama cunnada ama xayawaanka.
Ku suuqgeeyay: AbbVie Inc. Waqooyiga Chicago, IL 60064, USA. Dib loo eegay May, 2015
QAAR KA MID AH DHAQANKA
Khibrad Tijaabo Caafimaad
Sababtoo ah tijaabooyinka bukaan socodka waxaa lagu sameeyaa xaalado kaladuwan oo kaladuwan, heerarka falcelinta xun ee lagu arkay tijaabooyinka daaweynta ee daroogada si toos ah looma barbar dhigi karo heerarka tijaabooyinka caafimaad ee daroogo kale lagamana yaabo inay ka tarjumayaan heerarka lagu arkay ficil ahaan.
Tijaabooyinka Caafimaadka ee Ragga Hypogonadal
Jadwalka 2 wuxuu muujinayaa dhacdooyinka dhammaan dhacdooyinka xunxun ee uu xukumo baaruhu inuu ugu yaraan suuragal yahay inuu xiriir la leeyahay daaweynta AndroGel 1% oo uu ku warbixiyo> 1% bukaanno ku jira 180 Maalmood, Daraasadda Wajiga 3.
Jadwalka 2: Dhacdooyinka xun ee suurtogalka ah, Malaha ama Dhab ahaan La Xiriira Isticmaalka AndroGel 1% ee 180-Maalmood ee La Xakameeyay Tijaabada Caafimaadka
Dhacdo xun Qiyaasta AndroGel 1%
finanka 1% 3% 8%
Falcelinta Goobta Codsiga 5% 3% 4%
Kireynta Dareenka 0% 3% 3%
Ginecomastia 1% 0% 3%
Madax 4% 3% 0%
Tijaabada Shaybaarka Aan Caadi Ahayn * 6% 5% 3%
Libido oo yaraatay 0% 3% 1%
Dareemo 0% 3% 1%
Naasaha Xanuun 1% 3% 1%
Qanjirka 'Prostate Disorder' 3% 3% 5%
Cudurka Testis *** 3% 0% 0%
* Tijaabada shaybaarka aan caadi ahayn waxay ka dhacday sagaal bukaan oo leh hal ama in ka badan dhacdooyinka soo socda ee la soo sheegay: hemoglobin sare ama hematocrit, hyperlipidemia, triglycerides oo sareeya, hypokalemia, hoos u dhac HDL, gulukoos sare, creatinine sare, wadarta bilirubin sare.
**Dhibaatooyinka qanjirka 'prostate' waxaa kujiray shan bukaan oo qaba qanjirka 'prostate', mid leh BPH, iyo mid leh natiijooyinka PSA oo sareeya.
***Ciladaha xiniinyaha waxaa lagu soo warramey laba bukaan: mid leh varicocele bidix iyo mid leh xasaasiyad yar oo ah xiniinyaha bidix.
Dareen-celinta kale ee aan caadiga ahayn ee xun, ayaa lagu soo warramey in ka yar 1% bukaannada ay ku jiraan: amnesia, walaac, timo midab doorsoon, dawakhaad, maqaar qalalan, hirsutism, cadaawada, kaadida oo xumaata, suuxdinta, guska khalkhal, barar qafiif ah, dhidid, iyo vasidilation.
Imtixaankan tijaabada ah ee maalinlaha ah ee '180', tijaabinta maqaarka ee goobta dalabka waxaa laga soo sheegay AndroGel 1%, laakiin midkoodna kuma cuslaanin inuu u baahdo daaweyn ama joojinta daroogada.
Lix bukaan (4%) tijaabadan ayaa leh dhacdooyin xun oo keenay joojinta AndroGel 1%. Dhacdooyinkaas waxaa ka mid ahaa: cerebral dhiigbax, gariir (midkoodna looma tixgelin inuu laxiriira maamulka AndroGel 1%), niyad jab, murugo, xusuus la'aan, kor u kacsan qanjirka 'prostate' antigen, Iyo hypertension. Ma jiro qof bukaan ah oo loo yaqaan 'AndroGel' oo la joojiyay 1% sababo la xiriira falcelinta maqaarka.
Daraasad dawooyin-dawladeed oo gaar ah oo aan la xakameynin oo ku saabsan bukaanada 10, laba ayaa lahaa dhacdooyin xun oo la xiriira AndroGel 1%; kuwani waxay ahaayeen asthenia iyo niyad jab ku dhaca hal bukaan oo kordhay libido iyo hyperkinesia kan kale.
3 sano gudahood, qiyaasta dabacsan, kordhinta daraasad, dhacdooyinka dhammaan dhacdooyinka xunxun ee uu xukumo baaruhu inuu ugu yaraan suuragal yahay inuu la xiriiro daaweynta AndroGel 1% oo lagu soo warramey> 1% bukaanada waxaa lagu muujiyey Jadwalka 3.
Jadwalka 3: Dhacdooyinka xun ee suurtogalka ah, Malaha ama Xaqiiqdii la Xiriira Isticmaalka AndroGel 1% ee Sannadka 3aad, Qiyaasta Is-bedbeddelaya, Daraasadda Dheeraynta
Dhacdo xun Boqolkiiba maadooyinka
Tijaabada Shaybaarka Aan Caadi Ahayn + 9.3
Maqaarka oo qalalan 1.9
Falcelinta Goobta Codsiga 5.6
Prostate-ka la balaadhiyay 11.7
Kansarka qanjirka 'Prostate' 1.2
Calaamadaha kaadi-mareenka * 3.7
Cudurka Testis ** 1.9
+Baaritaanka shaybaarka oo aan caadi ahayn waxay ku dhacday bukaanada 15 oo leh hal ama in kabadan dhacdooyinkan soosocda ee la soo sheegay: sare uqaadka AST, sare uqaadida ALT, testosterone kacsan, hemoglobin sare ama hematocrit, kolestarool kacsan, saamiga kolestaroolka / LDL oo sareeya, triglycerides kacsan, HDL kacsan, serin creatinine kacsan.
*Calaamadaha kaadida waxaa ka mid ahaa nocturia, kaadida oo yaraata, kaadi ceshan la'aanta, kaadi heynta, deg deg darida kaadida iyo socodka kaadi mareenka.
**Ciladaha xiniinyaha waxaa ku jiray saddex bukaan. Waxaa jiray laba tijaabo ah oo aan la taaban karin iyo mid qaba danqasho yar yar oo xiniinyaha ah.
Laba bukaan ayaa soo sheegay dhacdooyin halis ah oo khatar ah oo loo tixgeliyey inay suurtogal tahay inay la xiriiraan daaweynta: xididdada dhiigga oo si qoto dheer u socota (DVT) iyo cilladda qanjirka 'prostate' ee u baahan a soo-goynta transurethral ee qanjirka 'prostate' (TURP).
Joojinta dhacdooyinka xun ee daraasaddan waxaa ka mid ahaa: laba bukaan oo qaba falcelinta goobta codsi, mid qaba kelyo xanuun, iyo shan qaba xanuunnada qanjirka 'prostate' (oo ay ku jiraan kororka dhiigga ee PSA ee bukaannada 4, iyo kordhinta PSA oo leh wayneeyo prostate bukaanka shanaad).
Kordhinta Serum PSA waxaa lagu arkay tijaabooyinka caafimaad ee ragga Hypogonadal
Intii lagu gudajiray daraasadii ugu horeysay ee 6-bilood, isbedelka celceliska ah ee qiyamka PSA wuxuu lahaa koror tirakoob oo ballaaran oo ah 0.26 ng / mL. Serum PSA waxaa lagu cabiray 6dii biloodba mar intaas ka dib ragga 162 ee hypogonadal ee AndroGel 1% ee daraasadda kordhinta 3-sano. Ma jirin kordhin dheeraad ah oo xagga tirakoobka ah oo lagu arkay celceliska PSA laga soo bilaabo 6 bilood illaa 36 bilood. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray koror ku yimid serum-ka PSA oo lagu arkay qiyaastii 18% bukaanno shaqsi ah. Isbeddelka guud ee celceliska aasaasiga ah ee qiimaha serum PSA ee kooxda oo idil laga bilaabo bisha 6 illaa 36 wuxuu ahaa 0.11 ng / mL.
Labaatan iyo sagaal bukaan (18%) ayaa la kulmay shuruudaha per-protocol ee loogu talagalay kordhinta serum PSA, oo lagu qeexay> 2X aasaasiga ama hal seram oo PSA ah> 6 ng / mL. Intooda badan (25/29) waxay la kulmeen shuruuddan iyaga oo ugu yaraan labalaabaya PSA-kooda aasaasiga. Xaaladaha badankood marka PSA ugu yaraan labanlaabto (22/25), qiimaha dhiigga ugu sarreeya ee PSA wuxuu ahaa weli <2 ng / mL. Dhacdadii ugu horreysay ee horay loo sii cayimay, kororka aasaasiga ee serum PSA waxaa lagu arkay ama kahor Bisha 12 inta badan bukaanada la kulmay shuruudahan (23 ee 29; 79%).
Afar bukaan ayaa la kulmay shuruuddan iyagoo haysta serum PSA> 6 ng / mL iyo kuwan, qiyaasta ugu badan ee serum PSA waxay ahaayeen 6.2 ng / mL, 6.6 ng / mL, 6.7 ng / mL, iyo 10.7 ng / mL. Laba ka mid ah bukaannadan, kansarka qanjirka 'prostate waxaa laga helay biopsy. Heerarka ugu horreeya ee bukaanka PSA waxay ahaayeen 4.7 ng / mL iyo 6.2 ng / mL aasaasiga iyo Bisha 6 / Final, siday u kala horreeyaan. Heerarka labaad ee PSA ee bukaanka waxay ahaayeen 4.2 ng / mL, 5.2 ng / mL, 5.8 ng / mL, iyo 6.6 ng / mL aasaasiga, Bisha 6, Bisha 12, iyo Final, siday u kala horreeyaan.
Dareen-celinta xun ee soo socota ayaa la aqoonsaday inta lagu jiro oggolaanshaha boostada isticmaalka AndroGel 1%. Sababtoo ah falcelinta waxaa si iskood ah looga soo sheegay dad aan cabbirkooda la hubin, had iyo jeer suurtagal maahan in si kalsooni leh loo qiyaaso soo noqnoqoshadooda ama la dhiso xiriir sababi kara soo-gaadhista daroogada (Sanduuqa 4).
Jadwalka 4: Dareen-celinta xun ee Daroogada ee Khibradda Dib-u-iibinta ee AndroGel 1% ee Qaybta Nidaamka Nidaamka 'MedDRA'
Dhiigga iyo cilladaha nidaamka qalliinka: Hgb sare, Hct (polycythemia)
Xanuunnada wadnaha iyo xididdada: Cudurka 'myocardial infarction', stroke
Cudurka Endocrine: Hirsutism
Xanuunada caloosha ku dhaca: Lalabbo
Dhibaatooyinka guud iyo falcelinta goobta maamulka: Asthenia, barar, malaise
Cilladaha xubnaha taranka: Kaadida oo xumaata
Ciladaha cagaarshowga: Tijaabooyinka shaqo ee aan caadiga ahayn ee beerka (tusaale, transaminases, GGTP oo sareeya, bilirubin)
Baaritaannada: PSA oo kacsan, isbadalada elektaroolka (nitrogen, kalsiyum, kalsiyam, fosfooraska, sodium), isbadalada kudhaca dhiigga (hyperlipidemia, triglycerides sare, hoos udhaca HDL), dulqaadka gulukooska oo liita, isbeddellada kudhaca testosterone, culeyska oo kordha
Neoplasms xun, oo xun oo aan la cayimin (qanjidhada iyo burooyinka): Kansarka qanjirka 'prostate'
Nidaamka neerfaha: Madax xanuun, dawakhaad, hurdo la'aan, hurdo la'aan
Cilladaha maskaxda: Niyad jab, shucuur shucuur, libido yaraatay, walwal, cadaawad, amnesia, walaac
Nidaamka taranka iyo cilladaha naasaha: Gynecomastia, mastodynia, balaarinta qanjirka 'prostate', atrophy xiniinyaha, oligospermia, priapism (kacsiga soo noqnoqda ama dheer)
Ciladaha neefsashada: Dyspnea
Dhibaatooyinka unugyada maqaarka iyo subcutaneous: Finanka, alopecia, falcelinta goobta codsashada (pruritus, maqaarka qalalan, erythema, finanka, timaha midabbada leh, paresthesia), dhidid
Ciladaha xididdada dhiigga Dhiig-kar, vasodilation (biyo kulul), xinjirowga dhiigga
Soo-gaadhista Sare ee Hormoonkaas ee Carruurta
Kiisaska soo-gaadhista labaad ee testosterone taasoo keentay faafitaanka carruurta ayaa lagu soo warramey kormeerka dukaanka. Calaamadaha iyo astaamaha lagu garto kiisaskan la soo sheegay ayaa ka mid ahaa balaadhinta kintirka (faragelinta qalliinka) ama guska, horumarinta timaha xubinta taranka, koritaanka kacsiga iyo libido, dabeecadaha gardarrada ah, iyo da'da lafta sare. Xaaladaha badankood natiijooyinka la soo sheegay, astaamahan iyo astaamahan waxaa lagu soo warramey inay dib u noqdeen ka saarista soo-saarka testosterone gel. Xaalado dhawr ah, si kastaba ha noqotee, way sii ballaadheen xubnaha taranka Si buuxda ugama soo laabanin da'da cabirka caadiga ah ee ku habboon, da'da da'da lafihiisuna waxay si dhexdhexaad ah uga sii weyn tahay da'da taariikh ahaan. Xaaladaha qaarkood, xiriir toos ah oo lala yeesho goobaha arjiga ee maqaarka ragga iyadoo la adeegsanayo jel testosterone. Ugu yaraan hal kiis oo la soo sheegey, weriyuhu wuxuu tixgeliyey suurtagalnimada soo-gaadhis labaad oo ka timaadda walxaha sida shaararka isticmaalaha testosterone iyo / ama dhar kale, sida tuwaallo iyo go'yaal [eeg DIGNIIN IYO KA HADALKA].
Testosterone waa kiimiko laga helo ragga oo keliya.Eeg Jawaabta
Isbedelada insulin xasaasiyadda ama xakamaynta glycemic ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo bukaanada lagu daaweeyo androgens. Bukaannada qaba sonkorowga, saameynta dheef-shiid kiimikaadka ee androgens way yaraan kartaa sonkorta dhiigga oo sidaas darteed, waxay yareyn kartaa shuruudaha insulin-ta.
Isbedelada xinjirowga waxqabadka waxaa lagu arki karaa androgens, sidaa darteed kormeer badan oo joogto ah saamiga caalamiga ah ee caadiga ah (INR) iyo waqtiga prothrombin waxaa lagula talinayaa bukaanka qaata dawooyinka xinjirowga lidka ku ah, gaar ahaan bilowga iyo joojinta iyo xajiin daaweynta.
Isticmaalka isku midka ah ee testosterone oo leh hormoonka loo yaqaan 'adrenocorticotropic hormone' (ACTH) ama corticosteroids wuxuu sababi karaa kordhinta dheecaanka jirka wuxuuna u baahan yahay kormeer taxaddar leh gaar ahaan bukaanada qaba cudurrada wadnaha, kilyaha ama cagaarshowga.
Ku Xadgudubka Daroogada Iyo Ku-tiirsanaanta
Maandooriyaha la Xakameeyo
AndroGel 1% waxay kakoobantahay testosterone, maadada Jadwalka III ee laxakameeyo eek ujirta Sharciga Maadooyinka La Xakameeyo.
Cudurrada Anabolic steroids, sida testosterone, ayaa lagu xadgudbaa. Xadgudubka ayaa inta badan lala xiriiriyaa waxyeelo jireed iyo mid maskaxeed oo xun.
In kasta oo ku tiirsanaanta daroogada aan lagu diiwaangelin shakhsiyaadka isticmaalaya qiyaasaha daaweynta ee anabolic steroids tilmaamaha la oggolaaday, ku tiirsanaanta waxaa lagu arkaa shakhsiyaadka qaarkood oo ku xadgudbaya qiyaaso badan oo ah steroids anabolic. Guud ahaan, anabolic steroid ku tiirsanaanta waxaa lagu gartaa seddex ka mid ah kuwan soo socda:
Qaadashada daroogo ka badan intii loogu talo galay
Sii wadida isticmaalka daroogada inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin caafimaad iyo bulsho
Waqti muhiim ah oo lagu qaatay helitaanka qadar ku filan oo daroogo ah
Rabitaanka steroids dhiska marka sahayda daawooyinka la joojiyo
Ku adkaanta joojinta isticmaalka daroogada in kasta oo rabitaan iyo isku day la sameeyo
Khibradda cilladda ka-noqoshada marka la joojiyo isticmaalka steroid dhiska
Digniinta & Taxadarka
Ay kamid tahay KA HADALKA qaybta.
Ka sii darida qanjirka 'Prostatic Hyperplasia' (BPH) iyo Khatarta Khatarta ah ee Kansarka Prostate
Bukaanka qaba BPH lagu daaweeyay androgens waxay ku jiraan halista sii kordheysa ee ka sii dareysa calaamadaha iyo astaamaha BPH. La soco bukaanada qaba BPH calaamadaha iyo astaamaha sii xumaanaya.
Bukaannada lagu daweeyo androgens ayaa laga yaabaa inay ku jiraan halista sii kordheysa kansarka qanjirka 'prostate. Ku qiimee bukaan socodka prostatekansarka kahor intaan la bilaabin iyo inta lagu jiro daweynta androgens [eegSHARCIYADA, LACAG LA'AAN AH iyo Toxicology aan dawaynin].
Suurtagalnimada Soo-gaadhista Sare ee Hormoonkaas
Kiisaska soo-gaadhista labaad ee keenaysa ficil-celinta carruurta ayaa lagu soo warramey kormeerka suuq-geynta. Calaamadaha iyo astaamaha waxaa kamid ah balaadhinta guska or kintirka, koritaanka timaha xubinta taranka, kacsiga kacsiga iyo libido, dabeecad dagaal, iyo da'da lafaha oo horumarsan. Xaaladaha badankood, astaamahan iyo astaamahan waxay dib isugu noqdeen iyadoo laga saaray soo-gaadhista testosterone jel. Xaalado dhawr ah, si kastaba ha noqotee, way sii ballaadheen xubnaha taranka Si buuxda ugama soo laabanin cabirka caadiga ah ee da'da ku habboon, da'da da'da lafihiisuna waxay si dhexdhexaad ah uga weyn tahay da'da taariikheed. Khatarta wareejinta ayaa ku kordhay qaar ka mid ah kiisaskaas iyada oo aan loo hoggaansamin taxaddarrada ku habboon isticmaalka habboon ee sheyga testosterone. Carruurta iyo haweenku waa inay iska ilaaliyaan inay la xiriiraan goobaha codsiyada aan maydhin ama aan dharka lahayn ee ragga isticmaalaya AndroGel 1% [eeg QAADASHADA IYO MAAMULKA, U Isticmaal Dadweynaha Gaarka ah iyo FARMAAJO CILMI].
Isbeddelada aan habboonayn ee xubnaha taranka baaxadda ama horumarka timaha xubinta taranka ama libido ee carruurta, ama isbeddelada ku dhaca qeybinta timaha jirka, kororka weyn ee finanka, ama calaamadaha kale ee lagu garto haweenka qaangaarka ah waa in loo galiyaa dhakhtarka iyo suurtagalnimada soo-gaadhista labaad ee testosterone testosterone sidoo kale loo geeyo dhakhtarka. Jeelka testosterone waa in si dhakhso leh loo joojiyaa illaa inta laga ogaanayo waxa keena ficil-celinta.
Kordhinta gudaha hematocrit, milicsiga kororka tirada unugyada dhiigga cas, waxay u baahan kartaa yaraynta ama joojinta testosterone. Hubi hematocrit kahor intaadan bilaabin daaweynta. Waxay sidoo kale ku habboonaan laheyd in dib loo qiimeeyo dhiig-baxa 3 ilaa 6 bilood ka dib bilaabista daaweynta, ka dibna sanadkiiba. Haddii hematocrit uu kacsan yahay, jooji daaweynta illaa hematocrit uu hoos ugu dhaco fiirsashada la aqbali karo. Kordhinta tirada unugyada dhiigga cas waxay kordhin kartaa halista dhacdooyinka dhiig-karka.
Waxaa jiray warbixino ku saabsan calaamadeynta suuq-geynta dhacdooyinka dhiigga wadnaha, oo ay ku jiraan xididdada dhiigga oo si qoto dheer u socota (DVT) iyo sambabada shucuur ahaan (PE), bukaanka isticmaala alaabada testosterone sida AndroGel 1%. Qiimee bukaanada soo sheega calaamadaha xanuunka, bararka, diirimaadka iyo erythema qaybta hoose ee DVT iyo kuwa ku soo booda neefta oo aad u yaraata ee loo yaqaan 'PE'. Haddii laga shakisan yahay dhacdo dhiig-xinjirowga dhiigga ah, jooji daaweynta AndroGel 1% oo bilow shaqo-ku-habboon iyo maamul [eeg LACAG LA'AAN AH].
Tijaabooyinka badbaadada caafimaad ee muddada dheer lama sameynin si loo qiimeeyo qalabka wadnahanatiijooyinka daaweynta beddelka testosterone ragga. Ilaa hadda, daraasadaha epidemiologic iyo tijaabooyinka la xakameynayo ee la xakameynayo waxay ahaayeen kuwo aan ku habbooneyn go'aaminta halista dhacdooyinka waaweyn ee wadnaha iyo xididdada dhiigga (MACE), sida kuwa aan dhiman Wadnaxanuun myocardial, aan loo dhiman garaaca, iyo dhimashada wadnaha, iyadoo la adeegsanayo testosterone marka la barbar dhigo adeegsiga. Daraasadaha qaarkood, laakiin dhammaantood maahan, waxay soo sheegeen khatarta sii kordheysa ee MACE iyadoo lala xiriirinayo isticmaalka daaweynta beddelka testosterone ee ragga.
Bukaanka waa in lagu wargaliyaa halistaan ​​suurtagalka ah markay go'aansanayaan inay isticmaalaan ama ay sii wadaan isticmaalka AndroGel 1%.
U Isticmaal Haweenka
Sababtoo ah la'aanta qiimeynta la xakameynayo ee haweenka iyo saameynta ay ku yeelan karto ficil-celinta, AndroGel 1% looma tilmaamo isticmaalka haweenka [eeg SHARCIYADA iyo U Isticmaal Dadweynaha Gaarka ah].
Suurtagalnimada Saamaynta Daran ee Spermatogenesis
Qiyaaso badan oo ah exogenous androgens, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, shahwadawaxaa lagu cabudhin karaa iyada oo loo marayo ka hortagga jawaab celinta feeraha hoormoonka kiciya follicle-kicinta (FSH) oo suuragal ah inuu u horseedo waxyeelo xun xadka manida oo ay ku jiraan shahwada tirinta.
Isticmaalka dheeraadka ah ee qadar sare oo ah hadal firfircoon 17-alpha-alkyl androgens (tusaale, methyltestosterone) ayaa lala xiriiriyay waxyeelo cagaarshow oo daran (cagaarshowga, neoplasms cagaarshow, cholestatic cagaarshow, Iyo cagaarshow). Cudurka cagaarshowga ee 'Peliosis hepatis' wuxuu noqon karaa mid nafta halis geliya ama dilaa ah Dhibaato. Daaweynta muddada-dheer leh murqaha testosterone enanthate wuxuu soo saaray adenomas cagaarshow oo badan. AndroGel 1% lama oga inuu sababo saameyntan xun.
Androgens, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, ayaa dhiirrigelin kara haynta sodium iyo biyaha. Edema, leh ama aan lahayn wadne garaacista wadnaha, waxaa laga yaabaa inay dhibaato weyn ku noqoto bukaanada qaba cudurkii hore ee wadnaha, kilyaha, ama cagaarshowga [eeg LACAG LA'AAN AH].
Ginecomastia laga yaabaa inay horumariyaan kuna adkaystaan ​​bukaannada lagu daaweynayo androgens, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, loogu talagalay hypogonadism.
Daaweynta ragga hypogonadal ee testosterone waxay awood u yeelan kartaa xibin gal, hurdo bukaannada qaarkood, gaar ahaan kuwa leh arrimaha halista sida buurnaanta ama cudurada sanbabada ee joogtada ah [eeg LACAG LA'AAN AH].
Isbeddelada ku dhaca dhiiga astaanta dufanka waxay ubaahantahay hagaajin qiyaasta ama joojinta daaweynta testosterone.
Androgens, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, waa in si taxaddar leh loogu adeegsadaa bukaannada kansarka ee halista ugu jira hypercalcemia (oo la xidhiidha) hypercalciuria). Bukaanadan waxaa lagula taliyaa kormeer joogto ah oo ku saabsan uruurinta kaalshiyamka dhiigga.
Hoos u dhaca Thyroxine-ku xidha Globulin
Androgens, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, ayaa yareyn kara isku-soo-uruurinta globulins-ka eek u xidha daawada 'thyroxin', taasoo keeneysa hoos u dhaca wadarta uruurinta 'T4 serum' iyo xaddiga cusbada ee T3 iyo T4. Bilaash thyroid uruurinta hormoonku isma beddello, hase yeeshe, mana jirto caddayn caafimaad oo ku saabsan cilladda tayroodh.
Waxyaabaha khamriga ku saleysan, oo ay ku jiraan AndroGel 1%, waa ololi karaan; sidaas darteed, bukaanada waa in lagula taliyaa inay iska ilaaliyaan dabka, ololka ama sigaar cabida ilaa ay ka qalajiso AndroGel 1%.
Macluumaadka La-talinta Bukaanka
Eeg Calaamadaha Bukaanka ee FDA-ansaxisay (Hagaha Daawada)
Bukaanka waa in lala socodsiiyaa waxyaabaha soo socda:
U Isticmaal Ragga La Yaqaanno ama Laga Shakiyey Prostate Ama Kansarka Naasaha
Ragga la yaqaan ama looga shakiyo qanjirka 'prostate' ama kansarka naasaha waa inuusan isticmaalin AndroGel 1% [eeg SHARCIYADA iyo DIGNIINTA IYO KA HORTAGA].
Suurtagalnimada Soo-gaadhista Sare ee Hormoonkaas iyo Talaabooyinka looga Hortagayo Soo-gaadhista Dugsiga Sare
Soo-gaadhista labaad ee testosterone ee carruurta iyo haweenku waxay ku dhici kartaa iyadoo la isticmaalayo gel testosterone testosterone ragga. Kiisaska soo-gaadhista labaad ee testosterone ayaa lagu soo warramey carruurta.
Dhakhaatiirtu waa inay kula taliyaan bukaanada calaamadaha la soo sheegay iyo astaamaha soo-gaadhista labaad oo ay ka mid noqon karaan waxyaabaha soo socda:
Carruurta; koritaanka galmada oo lama filaan ah oo ay ku jiraan balaadhin aan habooneyn oo ku saabsan guska ama kintirka, horumarinta dhiciska timaha xubinta taranka, kacsiga oo kordha, iyo dabeecada gardarada ah
Haweenka; isbeddelada ku dhaca qeybinta timaha, kordhinta finanka, ama calaamadaha kale ee saameynta testosterone
Suurtagalnimada soo-gaadhista heerka labaad ee testosterone testosterone waa in loo soo bandhigo daryeel caafimaad bixiyaha
AndroGel 1% waa in si dhakhso leh loo joojiyaa illaa inta laga ogaanayo sababta keenta in la faloba
U hoggaansamida adag ee taxadarka soo socda ayaa lagula talinayaa in la yareeyo suurtagalnimada soo-gaadhista heerka labaad ee testosterone laga bilaabo testosterone gel ee ragga [eeg Hagaha Daawada]:
Carruurta iyo haweenku waa inay iska ilaaliyaan inay la xiriiraan goobta (goobaha) maydhashada ama dharka ragga isticmaala testosterone gel
Bukaannada isticmaalaya AndroGel 1% waa inay u adeegsadaan sheyga sida lagu faray oo ay si adag ugu hoggaansamaan waxyaabaha soo socda:
Gacmaha dhaq saabuun iyo biyo kadib dalabka
Dabool goobta (yada) arjigadharka leh ka dib marka jelku qalalo
Dhaq goobta (yada) arjigasi fiican loogu dhaqo saabuun iyo biyo xaalad kasta oo ka horreysa halka maqaarka maqaar ka taabashada ee goobta dalabka lala yeelanayo qof kale la filayo
Haddii ay dhacdo in maqaarka aan la dhaqin ama aan dharka lahayn ee loo isticmaalay AndroGel 1% ay taabato maqaarka qof kale, aagga guud ee qofka kale lagala xiriiro waa in lagu dhaqaa saabuun iyo biyo sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah QAADASHADA IYO MAAMULKA, DIGNIINTA IYO KA HORTAGA iyo FARMAAJO CILMI].
Dareen-celinta Khatarta ah ee Androgens
Bukaanka waa in lagu wargeliyaa in daaweynta androgens ay u horseedi karto falcelinno xun oo ay ka mid yihiin:
Isbeddelada caadooyinka kaadiheysta sida kaadida oo badata habeenki, dhibaato kubilaabida socodka kaadidaada, kaadida oo badata marar badan maalintii, yeelashada rabitaan ah inaad ubaahantahay inaad musqusha aado isla markiiba, shilalka kaadida, aadan awoodin inaad kaadido iyo socodka kaadida oo daciif ah.
Dhibaatooyinka neefsashada, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira hurdada, ama hurdo badan maalintii.
Kacsi badan oo joogto ah ama joogto ah guska.
Lalabbo, matag, isbeddellada midabka maqaarka, ama anqawga barar.
Bukaannada waa in lagala taliyaa tilmaamaha soo socda ee loo adeegsado:
akhri Hagaha Daawada kahor intaadan bilaabin daawada AndroGel 1% iyo inaad dib u aqrisato markasta oo daawada laguu cusboonaysiiyo
AndroGel 1% waa in la adeegsadaa oo loo isticmaalaa si ku habboon si loo kordhiyo faa'iidooyinka loona yareeyo halista soo-gaadhista heerka labaad ee carruurta iyo haweenka
Ka ilaali AndroGel 1% meel aysan carruurtu gaarin
AndroGel 1% waa shey khamri salka ku haya oo ololi kara; sidaa darteed iska ilaali dabka, ololka ama sigaar cabista ilaa inta jelku qalalayo
Waa muhiim in loo hoggaansamo dhammaan kormeerka lagu taliyay
Ka warbixi wixii isbeddel ah ee xaaladooda caafimaad, sida isbeddelka caadooyinka kaadi, neefsashada, hurdada, iyo niyadda
AndroGel 1% ayaa loo qoraa si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee bukaanka; sidaa darteed, bukaanku waligiis waa inuusan AndroGel 1% cidna la wadaagin.
Sug 5 saacadood kahor dabbaasha ama maydhashada kadib codsiga AndroGel 1%. Tani waxay hubin doontaa in xaddiga ugu badan ee AndroGel 1% uu dhexgalo nidaamkooda.
Toxicology aan dawaynin
Kansarka, Mutagenesis, Daciifnimada Taranka
Testosterone waxaa lagu tijaabiyey cirbadeynta subcutanous iyo tallaalmid jiirka iyo jiirka. Jiirka, ee -galaha sababay ilma-galeenkaburooyinka caloosha oo xaaladaha qaarkood metastasized. Waxaa jira caddeyn muujineysa in cirbadeynta testosterone ee noocyada jiirarka dheddigga ay kordhiso u nuglaanshahooda cagaarshowga. Testosterone waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inuu kordhiyo tirada burooyinka oo uu yareeyo heerka kala-duwanaanta kansarka ku dhaca beerka ee jiirka. Testosterone wuxuu ahaa mid xun Tijaabooyin Ames iyo gudaha in vivo Tijaabooyin jiir micronucleus ah. Maamulka testosterone exogenous testosterone ayaa lagu soo warramey inuu xakameynayo spermatogenesis ee jiirka, eeyga iyo astaamaha aadanaha, taas oo dib loogu noqon karo joojinta daaweynta.
U Isticmaal Dadweynaha Gaarka ah
Uurka Nooca X [eeg SHARCIYADA]: AndroGel 1% waa laga hortagaa inta lagu jiro uurka ama dumarka uurka yeelan kara. Testosterone waa teratogenicwaxayna sababi kartaa waxyeelo uurjiifka ah. Ku soo gaadhista uurjiifka dheddigga ee androgens waxay sababi kartaa heerar kala duwan oo ficil-celin ah. Haddii daawadan la isticmaalo inta lagu jiro uurka, ama haddii bukaanku uur yeesho inta uu qaadanayo daroogadan, bukaanku waa in lala socodsiiyaa halista ku imaan karta uurjiifka.
In kasta oo aan la ogeyn inta testosterone u wareejineyso caanaha aadanaha, AndroGel 1% waa laga horjoogsadaa dumarka kalkaaliyayaasha caafimaadka sababtoo ah suurtagalnimada falcelin daran oo daran oo ku timaadda dhallaanka nuujinta. Testosterone iyo androgens kale ayaa si xun u saameyn kara nuujinta [eeg SHARCIYADA].
Badbaadada iyo waxtarka AndroGel 1% ee bukaanada cudurada carruurta ee ka yar 18 sano lama xaqiijin. Isticmaalka aan habooneyn wuxuu sababi karaa dardar galinta da'da lafaha iyo xiritaanka epiphyses waqti hore.
Ma jirin tiro ku filan oo bukaan jiif ah oo ku lug leh daraasadaha daaweynta ee la xakameynayo iyadoo la adeegsanayo AndroGel 1% si loo go'aamiyo in waxtarka kuwa ka weyn 65 sano ay ka duwan yihiin maaddooyinka da'da yar. Intaa waxaa sii dheer, ma jiraan macluumaad ku filan oo badbaado oo muddo dheer ah oo ku jira bukaan jiif si loo qiimeeyo halista ka imaan karta cudurka wadnahaiyo kansarka qanjirka 'prostate'.
Bukaannada Geriatric ee lagu daweeyo androgens sidoo kale waxay halis ugu jiraan inay ka sii daraan calaamadaha iyo astaamaha BPH.
Wax daraasad ah laguma sameyn bukaanada naafada ka ah kelyaha.
Dhibaato joogto ah
Wax daraasad ah laguma sameyn bukaanada naafada ka ah cagaarshowga.
Qiyaasta xad dhaafka ah & Ka-hortagga
Waxaa jira hal warbixin oo ah xad-dhaaf xad-dhaaf ah iyadoo la isticmaalayo cirbad la oggolaaday testosteronesheyga: Mawduucani wuxuu lahaa uruurinta testosterone ee ilaa 11,400 ng / dL oo leh a shil maskaxda ku dhaca.
Daaweynta qiyaasta xad dhaafka ah waxay ka koobnaan doontaa joojinta AndroGel 1%, ku dhaqida goobta dalabka saabuun iyo biyo, iyo calaamado habboon iyo daryeel taageero ah.
AndroGel 1% waa ka hortag ragga kansarka naaska ama kansarka la yaqaan ama looga shakisan yahay prostate [eeg DIGNIIN IYOKA HADALKA, LACAG LA'AAN AH, Iyo Toxicology aan dawaynin].
AndroGel 1% waa ka mamnuuc dumarka uurka leh ama uur yeelan kara, ama kuwa nuujinaya. AndroGel 1% waxay sababi kartaa waxyeelo uurjiifka ah markii la siiyo haweeney uur leh. AndroGel 1% waxay sababi kartaa falcelin daran oo daran oo ku timaada dhallaanka nuujinaya. Soo-gaadhista uurjiif haween ah ama ilmo nuujinaysa oo loo yaqaan 'androgens' waxay sababi kartaa heerar kala-duwan oo ficil-faafid ah. Haweenka uurka leh ama kuwa uur yeelan kara waxay u baahan yihiin inay ka warqabaan suurtagalnimada kala wareejinta testosterone ee ragga lagu daweeyay AndroGel 1%. Haddii haweeney uur leh ay ku dhacdo AndroGel 1%, waa in loo sheegaa halista ka imaan karta uurjiifka. DIGNIIN IYO KA HADALKA iyo U Isticmaal Dadweynaha Gaarka ah].
Dheecaan androgens, oo ay ku jiraan testosterone iyo dihydrotestosterone (DHT), Waxay mas'uul ka yihiin koritaanka iyo koritaanka caadiga ah ee xubnaha galmada ee ragga iyo ilaalinta astaamaha galmada labbaad. Saamayntaas waxaa ka mid ah koritaanka iyo koriinkedu prostate, seminal vesicles, guska iyo xargaha; horumarinta timo qaybinta timaha labka ah, sida wajiga, burooyinka, laabta iyo axillary timaha; xiiqsan ballaadhinta, murgacashada codka, isbeddelada muruqyada jirka iyo qaybinta dufanka. Testosterone iyo DHT waxay lagama maarmaan u yihiin horumarka caadiga ah ee astaamaha galmada labbaad.
Male hypogonadism, cillad caafimaad oo ka dhalata dheecaanka jirka oo aan ku filnayn testosterone, wuxuu leeyahay laba etiologies. Hypogonadism-ka aasaasiga ah waxaa sababa cilladaha gonads, sida Klinefelter's syndrome ama Leydig cell aplasia, Halka hypogonadism-ka labaad uu yahay guuldarada Hypothalamus (ama feeraha) si loo soo saaro gonadotropins ku filan (FSH, LH).
Ma jirin daraasado gaar ah oo dawooyinka farmasiga lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo AndroGel 1%.
AndroGel 1% ayaa bixiya jir ahaaneed xaddiga testosterone, soo saarista isku-uruurinta testosterone wareegga ee qiyaasta isku-uruurinta caadiga ah (298 - 1043 ng / dL) oo lagu arkay ragga caafimaadka qaba. AndroGel 1% waxay bixisaa gaarsiinta transdermal joogto ah ee testosterone 24 saacadood ka dib hal codsi oo kaliya si loo ilaaliyo, nadiif ah, maqaarka qalalan ee garbaha, gacmaha kore iyo / ama caloosha.
AndroGel 1% waa soo saaris hydroalkohol ah oo dhaqso u qalajiso markii la mariyo maqaarka dushiisa. Maqaarku wuxuu u adeegaa sida a kaydka sii deynta joogtada ah ee testosterone ee nidaamka wareegga. Qiyaas ahaan 10% qiyaasta testosterone ee lagu mariyo dusha maqaarka ee AndroGel ayaa lagu nuugaa wareegga nidaamka. Daraasad lala sameeyay AndroGel 1% 100 mg, bukaanada oo dhan waxay muujiyeen koror ku yimid testosterone oo dhiig ah 30 daqiiqo gudahood, sideed ka mid ah sagaal bukaanna waxay leeyihiin isku soo uruurinta testosterone ee dhiigga dhexdiisa inta u dhexeysa caadiga ah 4 saacadood kadib codsigii hore. Nuugista testosterone ee dhiiga ayaa sii socota 24-saac oo dhan oo qiyaasta qiyaasta ah. Xaddiga isku-dhafka ee Serum wuxuu qiyaasayaa isku-uruurinta gobolka joogtada ah dhammaadka 24-ka saacadood ee ugu horreeya waxayna ku jiraan xaalad deggan maalinta labaad ama saddexaad ee qiyaasta daawada.
Iyadoo la adeegsanayo hal codsi oo maalinle ah oo AndroGel 1% ah, cabbiraadaha dabagalka ah 30, 90 iyo 180 maalmood ka dib bilaabista daaweynta waxay xaqiijiyeen in isku-uruurinta testosterone ee dhiigga guud ahaan lagu hayo gudaha xadka u dhexeeya. Jaantuska 1 wuxuu soo koobayaa astaamaha 24-saac ee daawooyinka farmasokokinikada testosterone ee ragga hypogonadal (in ka yar 300 ng / dL) oo lagu hayo AndroGel 1% 50 mg ama 100 mg 30 maalmood. Celcelis ahaan (± SD) isku-uruurinta testosterone maalin kasta oo ay soo saarto AndroGel 1% 100 mg maalintii 30 waxay ahayd 792 (± 294) ng / dL iyo AndroGel 1% 50 mg 566 (± 262) ng / dL.
Jaantus 1: Micnaha (± SD) Xoog-saarista Dawooyinka Gobolka ee Serum testosterone Maalinta 30 ee Bukaannada Dalbanaya AndroGel 1% Hal Mar Maalintii
Wareegista testosterone waxay ugu horreyn ku xidhan tahay serum-ka galmada hormoon-qabashada globulin (SHBG) iyo albumin. Qiyaastii 40% testosterone oo ku jirta plasma waxay ku xidhan tahay SHBG, 2% wali lama furna (bilaash) inta soo hartayna waxay ku xidhan tahay albumin iyo protein kale.
Hormoonkaas waxaa lagu shubaa noocyo kala duwan oo ah 17-keto steroids iyada oo loo marayo labo wadiiqo oo kala duwan. Dheef-shiid kiimikaadka waaweyn ee firfircoon ee testosterone waa estradiol iyo dihydrotestosterone (DHT).
Isku-uruurinta DHT waxay kordhisay barbar-dhigga testosterone inta lagu jiro daaweynta AndroGel 1%. Celceliska heerka joogtada ah ee DHT / T inta lagu jiro 180 maalmood ee daaweynta AndroGel waxay udhaxaysay 0.23 ilaa 0.29 (50 mg of AndroGel 1% / maalin) iyo 0.27 ilaa 0.33 (100 mg of AndroGel 1% / maalin).
Waxaa jira kala duwanaansho fara badan nolosha nuska ah ee fiirsashada testosterone sida lagu soo sheegay suugaanta, oo u dhexeysa 10 ilaa 100 daqiiqo. Qiyaastii 90% qiyaasta testosterone ee la siiyo intramuscularly waxaa lagu sifeeyaa kaadida sida isku xidhka glucuronic iyo sulfuric acid ee testosterone iyo dheef-shiid kiimikaadka. Qiyaastii 6% ee qaddarka ayaa laga soo qaadaa saxarada, inta badan qaab aan isku xirneyn. Inaktivation of testosterone waxay ugu horreyn ku dhacdaa beerka.
Marka daaweynta AndroGel 1% la joojiyo ka dib marka la gaaro xaalad joogto ah, uruurinta testosterone ee dhiigga ayaa ku jirta heerka caadiga ah 24 illaa 48 saacadood laakiin waxay ku laaban doonaan isku soo uruurinta ku-meel-gaadhka ah maalinta shanaad kadib codsigii ugu dambeeyay.
Kala wareejinta tijaabada ah ee bukaanjiifka labka ah ee dumarka
Awoodda loogu talagalay dermal wareejinta testosterone ka dib isticmaalka AndroGel 1% isticmaalka waxaa lagu qiimeeyay daraasad caafimaad oo udhaxeysa ragga lagu qiyaaso AndroGel 1% iyo lamaanayaashooda dumarka ah ee aan la daaweyn. Laba (2) ilaa 12 saacadood ka dib codsashada 100 mg ah testosterone oo loo maamulo sida AndroGel 1% maadooyinka labka ah, lamaanayaasha (N = 38 lamaanaha) waxay ku hawlan yihiin maalin kasta, fadhiyada 15-daqiiqo ee xiriirka maqaarka iyo maqaarka si xoog leh wada-hawlgalayaasha haweenku waxay heleen ugu badnaan goobaha codsiyada ee AndroGel 1%. Xaaladaha daraasaddan awgood, dhammaan wada-hawlgalayaasha dumarka ah ee aan la ilaalin waxay leeyihiin xoog-saaris testosterone ah> 2 jeer qiimaha aasaasiga ah waqti ka mid ah daraasadda. Markii shaati daboolay goobta (yada) arjiga, wareejinta testosterone ka timaadda ragga ee loo geeyo lamaanayaasha dumarka ayaa gebi ahaanba laga hortagay.
Tijaabooyinka Caafimaadka ee Ragga Dadka Waaweyn Hypogonadal
AndroGel 1% waxaa lagu qiimeeyay xarumo badan, kala soocid, iskudhaf-kooxeed, firfircooni-xakameyn, tijaabo 180-maalmood ah oo ku saabsan 227 ragga hypogonadal. Daraasada waxaa lagu sameeyay 2 waji. Intii lagu jiray Muddada Daaweynta Bilowga ah (Maalmaha 1-90), 73 bukaan ayaa loo kala soocay AndroGel 1% 50 mg maalin kasta, 78 bukaan ah oo loo dirayo AndroGel 1% 100 mg maalin kasta, iyo 76 bukaan ah oo loo yaqaan 'testosterone transpromal testosterone non-scrotal transdermal system'. Daraasadu waxay ahayd laba-indhoole daawada AndroGel 1% laakiin calaamad furan oo loogu talagalay xakameynta firfircoon. Bukaannada asal ahaan loo kala soocay AndroGel 1% oo lahaa hal tijaabo oo tijaabo ah oo tijaabo ah oo ka kooban ama ka hooseeya heerka caadiga ah Maalintii 60 ayaa loo qoondeeyay 75 mg maalin kasta 91. Intii lagu jiray Muddada Daaweynta ee la Kordhiyay (Maalmaha 91-180), 51 bukaan ayaa ku sii socday AndroGel 1% 50 mg maalin kasta, 52 bukaan ayaa ku sii socday AndroGel 1% 100 mg maalin kasta, 41 bukaan ayaa sii waday on a non-scrotal testosterone transdermal system (5 mg maalin kasta), iyo 40 bukaan ah ayaa la siiyay AndroGel 1% 75 mg maalin kasta. Markii la dhammeeyo daraasadda koowaad, 163 ayaa isqoray 162 bukaanna waxaa lagu daweeyay calaamadda furan kordhinta barashada AndroGel 1% mudo dheeri ah oo gaareysa ilaa 3 sano.
Celceliska ugu sarreysa, weelka iyo celceliska uruurinta testosterone ee ku jira heerka caadiga ah (298-1043 ng / dL) ayaa lagu gaadhay maalintii ugu horreysay ee daaweynta iyadoo la qaatay qiyaaso 50 mg ah iyo 100 mg ah AndroGel 1%. Bukaannada sii wadaya AndroGel 1% 50 mg iyo 100 mg, kuwan macnahoodu waa isku-uruurinta testosterone waxaa lagu hayey inta u dhexeysa heerka caadiga ah ee 180-maalmood ee daraasadda asalka ah. Jaantuska 2 wuxuu soo koobayaa astaamaha daawada farmasokokinetic-ka ee 24-saac ee testosterone loo maamulo sida AndroGel 1% 30, 90 iyo 180 maalmood. Xaddiga testosterone ayaa la ilaaliyay ilaa inta bukaanku sii waday inuu si sax ah u adeegsado daaweynta loo qoray ee AndroGel 1%.
Jaantus 2: Ujeeddadeedu Tahay Mid Ku Tiirsanaanta Imtixaanka Gobolka ee Bukaannada leh Hal-Maalin AndroGel 1% Daaweyn
Jadwalka 5 wuxuu soo koobayaa celceliska uruurinta testosterone maalinta Daaweynta 180 ee loogu talagalay bukaannada qaata 50 mg, 75 mg, ama 100 mg oo AndroGel 1%. Qiyaasta 75 mg ayaa soo saartay celcelis ahaan uruurinta kuwa soo saaray 50 mg iyo 100 mg of AndroGel 1%.
Jadwalka 5aad: Micnaha (± SD) Ku Fiirsashada Xad-dhaafka ah ee Dawooyinka Serum-testosterone inta lagu jiro daweynta (Maalinta 180)
Cimilada 371 ± 165 406 ± 220 485 ± 156
129 ka mid ah ragga hypogonadal ee sida saxda ah loogu qoondeeyay AndroGel 1% oo lahaa xog ku filan oo falanqeyn ah, 87% waxay gaareen celcelis ahaan isku-uruurinta testosterone ee caadiga ah maalinta Daaweynta 180.
Bukaannada lagu daaweeyay AndroGel 1%, ma jirin kala duwanaansho lagu arkay celceliska uruurinta testosterone ee maalinlaha ee joogtada ah ee ku saleysan da'da, sababta hypogonadism, ama body mass index.
Isku-darka DHT wuxuu kordhay isbarbar dhigga isku-uruurinta testosterone ee AndroGel 1% qaadasho ah 50 mg / maalin iyo 100 mg / maalin, laakiin saamiga DHT / T wuxuu kusii jiray heerka caadiga ah, taasoo muujineysa helitaanka sare ee jir ahaaneed firfircoonaanta jirka iyo xajiin. Isugeynta Serum estradiol (E2) waxay si aad ah kor ugu kacday 30 maalmood gudahood markay bilawday daaweynta AndroGel 1% 50 ama 100 mg / maalin wayna sare u kacday mudadii daaweynta oo dhan laakiin waxay kusii jirtay heerka caadiga ah ee ragga eugonadal. Heerarka serum ee SHBG ayaa aad u yaraaday (1 ilaa 11%) intii lagu jiray daaweynta AndroGel 1%. Ragga qaba hypogonadism-ka 'hypergonadotropic hypogonadism', heerarka dhiigga ee LH iyo FSH ayaa ku dhacay qaddar- iyo hab-ku-tiirsanaan waqtiga daaweynta AndroGel 1%.
Cudurka 'Phototoxicity' ee Aadanaha
Awoodda sawir-qaadashada ee AndroGel 1% ayaa lagu qiimeeyay laba-indhoole, daraasad hal-qaadasho ah oo ku saabsan maaddooyinka 27 oo leh noocyo maqaarka oo sawir leh. Ugu Yar Qiyaasta Erythema (MED) ee shucaaca ultraviolet ayaa loo go'aamiyay maaddo kasta. Hal 24 (+1) saac oo codsi ah oo dhejisyo nuqul ah oo ka kooban maqaallo tijaabo ah (gel placebo, testosterone gel, ama.) saline) waxaa loo sameeyay goobaha maqaarka aan la fahmin maalinta 1. Maalinta 2aad, maado kasta waxay heshay shan jeer oo soo-gaadhis ah oo ah ultraviolet shucaac, soo-gaadhis kasta oo ka weyn 25% kii hore. Qiimaynta maqaarka ayaa la sameeyay Maalmaha 2 ilaa 5. Soo gaadhista tijaabada iyo xakamaynta goobaha codsiyada maqaalka ee loo yaqaan 'ultraviolet light' ma soo saarin caabuq kordhay marka loo eego goobaha aan irradiated, oo aan muujinayn wax saameyn ah phototoxic.
(testosterone jel) 1%
Aqri Hagahan Daawada ee la socda ANDROGEL 1% kahor intaadan bilaabin qaadashadiisa iyo markasta oo aad hesho dib u buuxin. Waxaa jiri kara macluumaad cusub. Tilmaamahan Dawada ah kama qaadayo meesha kala hadalka daryeel caafimaad bixiyahaaga xaaladaada caafimaad ama daaweyntaada.
Maxay tahay macluumaadka ugu muhiimsan ee ay tahay inaan ka ogaado ANDROGEL 1%?
1. Calaamadaha iyo astaamaha hore ee qaangaadhnimada ayaa ku dhacay carruurta yar yar ee si kama 'ah ugu soo gaadhay testosterone iyada oo lala xidhiidhayo ragga isticmaalaya ANDROGEL 1%.
Calaamadaha iyo astaamaha qaangaarnimada hore ee cunugga waxaa ka mid noqon kara:
weynaaday guska or kintirka
horumarka hore ee timaha xubinta taranka
kacsiga kacsiga ama galmada
ANDROGEL 1% waxay ka wareejin kartaa jirkaaga una gudbin kartaa dadka kale.
2. Haweenka iyo caruurtu waa inay ka fogaadaan taabashada meesha aan la dhaqin ama aan dharka lahayn ee ANDROGEL 1% maqaarkaaga laga mariyey.
Jooji isticmaalka ANDROGEL 1% una wac dhakhtarkaaga isla markiiba haddii waxaad ku aragtaa wax calaamado iyo astaamo cunug ama haween ah oo laga yaabo inay kudhaceen shil ku dhaca ANDROGEL 1%.
Calaamadaha iyo astaamaha soo-gaadhista ANDROGEL 1% ee carruurta waxaa ka mid noqon kara:
guska balaaran ama kintirka
Calaamadaha iyo astaamaha soo-gaadhista ANDROGEL 1% dumarka waxaa ka mid noqon kara:
isbeddelka timaha jirka
koror ballaaran oo finanka ah
Si loo yareeyo halista wareejinta ANDROGEL 1% ee jirkaaga loona wareejiyo dadka kale, waa inaad raacdaa tilmaamahan muhiimka ah:
Codso ANDROGEL 1% oo keliya meelaha lagu daboolayo funaanad gacmo gaaban ah. Meelahaani waa garbahaaga iyo gacmahaaga sare, ama aagga caloosha (caloosha), ama garbaha, gacmaha kore iyo aagga caloosha.
Dhaq gacmahaaga Isla markiibaoo leh saabuun iyo biyo kadib markaad codsato ANDROGEL 1%.
Ka dib marka jelku qalalo, ku daboolo aagga arjiga arjiga.Meesha ku dabool ilaa aad ka maydho goobta arjiga si fiican ama aad u maydho.
Haddii aad fileyso inaad maqaar-ka-taabasho qof kale la xiriirto, ugu horreyn si fiican ugu maydh aagga dalabka saabuun iyo biyo.
Haddii haweeney ama cunug ay xiriir la sameeyaan ANDROGEL 1% aagga codsashada, aaggaas oo ku yaal haweeneyda ama ilmaha waa in si fiican loogu dhaqo saabuun iyo biyo isla markaaba.
Waa maxay ANDROGEL 1%?
ANDROGEL 1% waa dawo dhakhtar qoro oo ay kujiraan testosterone. ANDROGEL 1% waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ragga qaangaarka ah ee haysta testosterone hoose ama aan lahayn sababo la xiriira xaalado caafimaad qaarkood.
Bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga ayaa baari doona dhiigaaga kahor intaadan bilaabin iyo inta aad qaadaneysid ANDROGEL 1%.
Lama oga in ANDROGEL 1% ay amaan tahay ama wax ku ool tahay in lagu daaweeyo ragga qaba testosterone hoose sababta oo ah gaboobaya.
Lama oga in ANDROGEL 1% ay amaan tahay ama wax ku ool tahay carruurta ka yar 18 sano jir. Isticmaalka aan habooneyn ee ANDROGEL 1% wuxuu saameyn ku yeelan karaa koritaanka lafaha carruurta.
ANDROGEL 1% waa walax la xakameeyo (CIII) maxaa yeelay waxay ka koobantahay testosterone oo bartilmaameed u noqon kara dadka ku xadgudba daawooyinka loo qoro. ANDROGEL-kaaga 1% ku hay meel aamin ah si aad u ilaaliso. Weligaa ANDROGEL-kaaga ha siinin qof kale 1%, xitaa haddii ay isku calaamado yihiin. Iibinta ama bixinta daawadan waxay waxyeeleyn kartaa dadka kale waxayna ka soo horjeedaa sharciga.
ANDROGEL 1% looguma talagalin dumarka.
Yaan u isticmaali karin ANDROGEL 1%?
Ha isticmaalin ANDROGEL 1% haddii aad:
waxay leeyihiin kansarka naasaha
haysato ama yeelan karto kansarka qanjirka 'prostate
uur leedahay ama laga yaabo inaad uur yeelato ama naas nuujiso. ANDROGEL 1% waxay dhaawici kartaa ilmahaaga aan dhalan ama naaska nuujiya.
Haweenka uurka leh ama uur yeelan kara waa inay ka fogaadaan taabashada aagga maqaarka ee ANDROGEL 1% la mariyey.
La hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga kahor intaadan qaadan dawadan haddii aad leedahay mid ka mid ah xaaladaha kor ku xusan.
Maxaan u sheegaa bixiyahayga daryeel caafimaad kahor intaanan isticmaalin ANDROGEL 1%?
Kahor intaadan isticmaalin ANDROGEL 1%, u sheeg daryeel bixiyahaaga haddii aad:
qabo kansarka naasaha
haysato ama yeelan karto prostate kansarka
Dhibaato xagga kaadida ah oo ay ugu wacan tahay qanjirka 'prostate' oo sii weynaaday
dhibaatooyin xagga wadnaha ah
qaba dhibaatooyin beerka ama kilyaha ah
Dhibaato xagga neefsashada ah intaad seexanaysid (xibin gal, hurdo)
leedahay xaalado caafimaad oo kale
U sheeg daryeel caafimaad bixiyahaaga dhammaan daawooyinka aad qaadato, oo ay ku jiraan dawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa aan dhakhtar qorin, fiitamiinnada, iyo dhirta lagu kabo.
Isticmaalka ANDROGEL 1% daawooyinka kale qaarkood saameyn ayey isku yeelan karaan.
Gaar ahaan, u sheeg daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad qaadato:
daawooyinka yareeya xinjirowga dhiigga
Ogow daawooyinka aad qaadato. Weydii daryeel caafimaad bixiyahaaga ama farmashiistaha liiska daawooyinkaan, haddii aadan hubin. Hayso liistooda oo tus takhtarkaaga iyo farmashiistahaaga markii aad hesho daawo cusub.
Sideen u isticmaalaa ANDROGEL 1%?
Waa muhiim inaad codsato ANDROGEL 1% sida saxda ah ee bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga uu kuu sheego.
Bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa kuu sheegi doona inta ANDROGEL 1% ah ee la codsado iyo goorta la codsanayo.
Bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ayaa badali kara daawadaada ANDROGEL 1%. Ha badalin daawadaada ANDROGEL 1% adigoon lahadlin bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga.
ANDROGEL 1% waa in lagu dhajiyaa aagga garbahaaga, gacmaha kore, ama caloosha oo ku daboolan doona funaanad gacmo gaab ah. Ha sameyn codso ANDROGEL 1% qaybaha kale ee jirkaaga sida guskaaga, xargaha, xabadka, kilkilaha (axillae), jilbaha, ama dhabarka.
Codso AndroGel 1% isla subax kasta isla waqtigaas. ANDROGEL 1% waa in la mariyaa maydhashada ama maydhashada ka dib.
Dhaq gacmahaaga isla markiiba oo leh saabuun iyo biyo kadib markaad codsato ANDROGEL 1%.
Ka fogow qubeyska, dabaasha, ama maydhashada ugu yaraan 5 saacadood ka dib markaad codsato ANDROGEL 1%.
ANDROGEL 1% ayaa ololi kara ilaa inta uu ka qalalayo. U daa ANDROGEL 1% qalalan kahor sigaarka ama aad ugu dhowaato olol furan.
U ogolow aagagga dalabka gebi ahaanba ka hor intaadan gashan funaanad.
Dalbashada ANDROGEL 1%:
ANDROGEL 1% waxay kujirtaa bambooyin ama baakado.
Kahor codsashada ANDROGEL 1%, hubi in garbahaaga, gacmaha kore, iyo caloosha ay nadiif yihiin, qalalan yihiin, oo uusan jirin maqaar jaban.
Goobaha laga codsado ANDROGEL 1% waa garbaha, gacmaha kore, ama caloosha oo lagu daboolayo funaanad gacmo gaab ah (Eeg Jaantuska A).
Haddii aad isticmaaleyso ANDROGEL 1% bamka:
Kahor intaadan isticmaalin dhalo cusub oo ah ANDROGEL 1% markii ugu horeysay, waxaad ubaahnaan doontaa inaad bamka bamgareysid. Si aad uhesho bamka ANDROGEL 1%, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah 3 jeer hoos u dhig ha isticmaal wax kasta oo ANDROGEL ah 1% oo soo baxay inta lagu gudajiro. Ku dhaq hoosta saxanka si aad uga fogaato soo-gaadhista shilka dadka kale. Mashiinkaaga ANDROGEL 1% ayaa diyaar u ah inuu isticmaalo.
Furka ka saar bamka. Ka dib, ku rakib sanka calaacasha gacantaada oo si tartiib ah hoos ugu riix bamka ilaa hoos. Codso ANDROGEL 1% goobta arjiga. Waxaad sidoo kale codsan kartaa ANDROGEL 1% si toos ah goobta arjiga.
Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo isla markiiba.
Bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa kuu sheegi doona tirada jeer ee aad ku riixeyso mashiinka qiyaas kasta.
Hadaad isticmaaleyso ANDROGEL 1% baakado:
Kala jeex jeex baakadda gebi ahaanba khadka dhibcaha. Isu ururi xagga hoose ee baakadda illaa kor.
Isu ururi dhammaan ANDROGEL 1% baakadka oo ku tuur calaacasha gacantaada. Codso ANDROGEL 1% goobta arjiga. Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa ANDROGEL 1% baakadka si toos ah goobta codsiyada.
ANDROGEL 1% waa in isla markiiba la codsadaa.
Waa maxay waxyeelooyinka suurtagalka ah ee ANDROGEL 1%?
Eeg Maxay tahay macluumaadka ugu muhiimsan ee ay tahay inaan ka ogaado ANDROGEL 1%?
ANDROGEL 1% waxay sababi kartaa waxyeelo daran oo ay kamid yihiin:
Haddii aad hore u heshay balaadhinta qanjirka 'prostate' calaamadahaaga iyo astaamahaagu way kasii dari karaan intaad isticmaaleyso ANDROGEL 1%. Tan waxaa ka mid noqon kara:
Kaadida oo badata habeenkii
Dhibaatada bilaabida socodka kaadidaada
kaadi badan marar badan
yeelashada rabitaan ah inaad u baahan tahay inaad musqusha aado isla markiiba
shil kaadi ah
awoodin inaad kaadiso ama socodka kaadida oo daciif ah
Khatarta sii kordheysa ee kansarka qanjirka 'prostate' Bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga waa inuu kaa hubiyaa kansarka qanjirka 'prostate' ama dhibaatooyinka kale ee qanjirka 'prostate' ka hor intaadan bilaabin iyo intaad isticmaaleyso ANDROGEL 1%.
Xinjirowga dhiigga ee lugaha ama sanbabada.Calaamadaha iyo astaamaha a xinjir dhiig lugtaada waxaa ka mid noqon kara lug xanuun, barar ama casaan. Calaamadaha iyo astaamaha xinjirowga dhiiggaaga sambabada waxaa ku jiri kara neefsashada oo dhib ah ama xanuun laabta ah.
Khatarta sii kordheysa ee wadno qabadka ama istaroogga
Qiyaaso badan ANDROGEL 1% way yareyn kartaa tirada shahwadaada.
Barar anqawyadaada, cagahaaga, ama jirkaaga, wadnaha ama wadna la'aan.
Naasaha oo weynaaday ama xanuun badan.
Dhibaato xagga neefsashada ah intaad seexanaysid (hurdada oo hurda).
Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga isla markiiba haddii aad isku aragto waxyeellooyinka halista ah ee kor ku xusan.
Saameynaha ugu caansan ee ANDROGEL 1% waxaa ka mid ah:
maqaarka cuncunka meesha ANDROGEL 1% la mariyo
baaritaanka shaybaarka isbedel
kordhay qanjirka 'prostate' gaar ah (tijaabo loo isticmaalo baaritaanka kansarka qanjidhka kaadi mareenka)
Waxyeelooyinka kale waxaa ka mid ah kacsi badan oo aan caadi kuu ahayn ama kacsi waqti dheer soconaya.
U sheeg daryeel bixiyahaaga haddii aad leedahay waxyeellooyin kale oo ku dhibaya ama aan kaa tagi doonin.
Kuwan oo dhami maaha waxyeellooyinka suurtagalka ah ee ANDROGEL 1%. Wixii macluumaad dheeraad ah, weydii daryeel caafimaad bixiyahaaga ama farmashiistahaaga.
Sideen ku keydsadaa ANDROGEL 1%?
Kaydi ANDROGEL 1% inta udhaxeysa 59 ° F ilaa 86 ° F (15 ° C ilaa 30 ° C).
Si badbaado leh ugu tuur waxyaabaha la isticmaalay ANDROGEL 1% qashinka guryaha. Ka taxaddar ka hortagga soo-gaadhista shilalka carruurta ama xayawaanka rabaayadda ah.
Ka fogee ANDROGEL 1% dabka.
Ka ilaali ANDROGEL 1% iyo dhammaan daawooyinka meel aysan carruurtu gaarin.
Macluumaad guud oo ku saabsan isticmaalka aaminka ah ee wax ku oolka ah ee ANDROGEL 1%
Daawooyinka mararka qaarkood waxaa loo qoraa ujeedooyin aan ahayn kuwa ku taxan Tilmaamaha Daawada. Ha u isticmaalin ANDROGEL 1% xaalad aan loo qorin. Ha siin ANDROGEL 1% dadka kale, xitaa haddii ay isku calaamado yihiin. Way dhaawici kartaa iyaga.
Tilmaamahan dawada wuxuu soo koobayaa macluumaadka ugu muhiimsan ee ku saabsan ANDROGEL 1%. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah, la hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga. Waxaad weydiin kartaa farmashiistahaaga ama bixiyaha xanaanada caafimaadka wixii macluumaad ah ee kusaabsan ANDROGEL 1% oo looqoray xirfadlayaasha caafimaadka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.ANDROGEL.com ama wac 1-800-633-9110.
Waa maxay waxyaabaha ku jira ANDROGEL 1%?
Qayb firfircoon: testosterone
Waxyaabaha aan firfircoonayn: carbomer 980, ethyl alcohol 67.0%, isopropyl myristate, biyo saafi ah iyo sodium hydroxide.